Dr Myles Munroe 10 Points Of Great Wisdom To Africa
Glory Ministries 12:12:00
Glory Ministries 12:01:00
Brand Builders 04:52:00
Brand Builders 04:42:00
Apostle Shiloh Masenyama Preaches At Tiyambuke 2018 (Shona Version)
Hauve musharukwa chiriporipotyo, kuti uzvikwanise unofanirwa kuziva Mwari kuti uve nehukama na Mwari.
Pane mukaha pakati pekuziva nezvaMwari ne kuziva Mwari. Vatendi vakungoda kuteera mavhuserere kuti vanzwe zvitsva kwete kuzoziva Mwari.
Kuneboka rinouya kuzoona mhosho dziri mharidzo dzevamwe, kwete kuzonzwa Mwari izvi zvino sanganisirawo vamwe vaye vakafunda.
Ma satanist anoporofitawo zvakare,kunyangwe n’anga dzinoziva zviga zvomweya naizvozvo usango enda kurikuenda hoto
Vakawanda vakazvipira kumuranda wa Mwari kwete mwari wacho.
Kereke yazara nevanoita dambe vanoziva zvose zvekuchurch asi vanongotadza Zvakadaro.
Vanoziva Mwari we mubible kuti amuite Mwari wake makata nokuti chivi chiri kumutapirira zvakanyanya.
Usangoshuvira ruzivo chete kwete kuti rwakashata asi shuvira nyasha dza Ishe wedu Jesu kupfuura zvose.
Ukasangana na Ishe wedu unogutsikana kuti zvinhu zvinouya zvichipfuura hapana chinogara chakadaro pasi pano pezuva.Zvingava zvakaoma nhasi asi ziva kuti Mwari anoshandura zvose,ramba wakabatirana naye,sangana naye usaite zvekuudzirwa nokuti wokuudzwa anonetsa sanganaye .
chinokuchengeta kuziva kwako Mwari,rara ne kumuka uchiziva kuti wakachengetwa.Avo vanoziva Mwari vanogara vakachengetwa mumapapiro ake mwari.
Pauro akabatwa na mwari achienda Damasco achienda kuno uraya n Kereke,ndipo paakazosangana na Mwari zvinhu zvikachinja kuti ndiye akange ave kuchemedzwa ne kuurayirwa shoko ra Mwari.
Usazvidza avo vanotaura zvakaipa pamusoro pe vanhu vamwari ivavo vachava vashumiri vakuru.
Glory Ministries 02:38:00
Glory Ministries 02:35:00